Wasiirro dowladda katirsan oo booqday dadkii ku dhaawacmay qaraxii Golaha Murtida iyo Madadaalada ee Muqdisho. – Radio Daljir
Wasiirro dowladda katirsan oo booqday dadkii ku dhaawacmay qaraxii Golaha Murtida iyo Madadaalada ee Muqdisho.
Mogadishu, Apr 06 -Golaha wasiirrada ee dowladda KMG ah ee Soomaaliya qaarkood ayaa maanta booqday dadkii ku dhaawacmay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee 4-tii bishan kadhacay xarunta Golaha Murtida iyo Madadaalada ee magaalada Muqdisho.
Dr Maxamed Yuusuf oo ah agaasimaha isbitaalka Madiina oo warbixin kooban wasiirada dowladda ka siiyay xaaladda dadkii dhaawacyadu ay soo gaareen ee la dhigay isbitaalka Madiina ayaa waxaa uu sheegay, isbitaalka inay soo gaareen 28-qof oo dhaawacyo ah, laba qof ayaa isbitaalka ku geeriyootay, 16-qof ayaa xiligaan ku sugan isbitaalka intii kalena dib ayay guryahoodii ugu noqdeen ayuu yiri Dr Maxamed Yuusuf agaasimaha guud ee isbitaalka Madiina.
Wasiirka caafimaadka ee dowladda faderaalka Cabdicasiis Sheekh Yuusuf ayaa isaguna mahad celin gaar ah u jeediyay isbitaalka Madiina iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay ee xiligaan ka howlgalaya magaalada Muqdisho.
Wasiirka, ayaa waxaa uu sidoo kale tilmaamay dowladdaha caalamka inay kala kaashan doonaan la tacaalidda dadka dhaawacyada ay kasoo gaareen qaraxii Golaha Murtida iyo Madadaalada dhowaan kadhacay oo ay ku lee?deen shacab badan.
4-tii bishan April ayay ahayd markii qarax ismiidaamin ah oo ay fulisay gabar da?deedu ka yartahay 20-sanadood uu kadhacay magaalada Muqdisho, qaraxa ayaa waxaa sheegatay kooxda Al-Shabaab.